एनआरएनएको महासचिवमा डा. हेमराजको घोषणा, महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्बजनिक – Dcnepal
सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धमा कण्डम प्रयोग नगर्दा बलात्कारको मुद्दा
द ग्रेट खलीको रेस्लिङ स्कुलका रेस्लरलाई कुटेर पैसा लुटियो
अस्ट्रेलियासँग भोलि हुने तेस्रो एकदिवसीय अगाडि शिखर धवन र रोहित शर्मा दुवै घाइते
विज्ञ सम्मेलनका लागि मन्त्री र सचिवहरुसँग एनआरएनएको छलफल
एनआरएनएको महासचिवमा डा. हेमराजको घोषणा, महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्बजनिक
प्रकाशित : २०७६ असोज १ गते ८:३५
लिस्बन । गैह्र आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन १५ देखि १७ अक्टुबरसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। परिषद्मा आगामी कार्यकाल २०१९-०२१ का लागि आकाङ्क्षीहरुले धमाधम आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन्।
आइसीसी महासचिवमा बेलायतका डा. हेमराज शर्माले उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा शर्माले आज महत्वाकांक्षी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणा पत्रमा उनले सबल, बहुआयामिक, स्मार्ट, परिणाममुखी, दीगो, उत्तरदायी, पारदर्शी र साझा एनआरएन बनाउने दावी गरेका छन्।
घोषणा पत्र निकै मेहनतकासाथ तयार पारेको देखिन्छ । उनका यी प्रतिवद्धताहरु व्यवहारमा लागू गर्न निकै गाह्रो त हुने नै छ तथापि अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले यत्तिको मिहेनत खर्चेर यत्तिको स्तरमा घोषणा पत्र तयार गर्न सकेका छैनन्। विद्वत र शालीन स्वभावका शर्माले यही घोषणा पत्रकै आधारमा पनि धेरै मतदाताको मन जित्न सक्नेछन्। यद्यपि उनका कतिपय आश्वासनहरु चुनावमुखी अर्थात नेता पाराका देखिन्छन्। उनले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र यस्तो रहेको छ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महासचिवका उम्मेदवार डा. हेम राज शर्माको घोषणापत्र
आदरणीय गैरआवासीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,
विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना भएको थियो । हाम्रा अग्रजहरुको अथक प्रयास र समर्पणले गैरआवासीय नेपाली संघ देश विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै आएको छ । स्थापनाको १६ वर्षिय अवधि मै ८१ देशमा औपचारिक सञ्जालको विस्तार गरेर बाहिर बस्ने नेपाली समुदायलाई एउटै मालामा जोड्न सफल भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा आप्रवासी कामदारहरुसँग जोडिएका ऐन कानून मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुका हकहितका विषयहरु सम्बोधन मात्र भएको छैन, हामी विदेशमा बस्नेहरुमा पनि मातृभूमीप्रतिको दायित्व झन् थपिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको सन् २००३ को दाँजोमा अहिले हामी बेग्लै अवस्थामा प्रवेश गरेका छौं । प्रविधिले फड्को मारेको छ। देश भित्रको राजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक धरातलमा परिवर्तन आएकोछ । बाहिर बस्ने नेपालीहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुनुका साथ उनीहरुको आर्थिक तथा पेसागत अवस्था सवल भएकोछ । दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरु (विदेशमा जन्मे हुर्केको पुस्ता)को संख्या क्रमशः बढ्दो छ । एनआरएनएका संस्थापकहरु संघको सकृय नेतृत्वमा हुनुहुन्न ।
बदलिएको यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई समय सापेक्ष विकास गर्ने र सुदूर भविष्यको मार्गचित्र (roadmap) तयार गर्ने अवसर यसपछिको पुस्तालाई आएको छ । यस ऐतिहासिक घडीमा म पनि यो प्रक्रियाको एक हिस्सा बन्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ संघको आगामी कार्यकाल (सन् २०१९–२१)का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसि)को महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु ।
विगत १४ वर्ष म गैरआवासीय नेपाली संघमा लगातार सक्रिय रहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको महासचिव, दुई कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य, प्रवक्ता हुँदै विगत तीन कार्यकाल संघको सल्लाहकार छु । विधान समितिको सदस्यबाट शुरु गरेर पछिल्लो तीन कार्यकाल यस समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । यस समितिमा रहि संघको नयाँ विधान (२००७ मा परिमार्जित) को खाका कोर्ने देखि संघका अधिकांश नियमावली–हरु निर्माण गर्ने क्रममा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका यहाँहरु मध्ये धेरैलाई थाहा भएको विषय हो । यो बीचमा सन् २०१८को एनआरएन प्रथम विश्व विज्ञ सम्मेलनको संयोजन गर्ने अवसर पनि मिल्यो । कार्यकारी पदमा नरहँदा पनि संघले आयोजना गरेका सबै विश्व सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन र महत्वपूर्ण बैठक गोष्ठीमा भाग लिँदै आएको छु । हालसम्मका पाँच वटै अध्यक्षहरु (उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामि–छाने, शेष घले र भवन भट्ट)को समितिमा रही प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर केही न केही भूमिकामा काम गरेको छु ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता तथा मतदान अधिकार लगायतका आप्रवासी हकहितका विषयमा राष्ट्रिय मुलधारका संचार माध्यमहरुमा लेख्दै र बोल्दै आएको छु । संघका ऐतिहासिक दस्ताबेजको संकलन, प्रकाशन, तथा संघ र यसका अभियान सम्बन्धी लेखरचना प्रकाशन गरी जनमानसमा पुर्याउँदै आएको छु । यसका अतिरिक्त पेशागत रुपमा मैले बेलायत, जापान, जर्मनी, ईटालीका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा अध्यन, अध्यापन र अनुसन्धानबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवबाट पनि गैरआवासीय नेपाली संघ लाभान्वित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसर्थ म महासचिवमा निरवाचित हुँदा गैरआवासीय नेपाली संघमा प्राज्ञिकवर्गको प्रतिनिधित्व मात्र हुने छैन संघमा हालसम्म निराशाजनक रहेको यो समुदायको सहभागितालाई समेत थप उत्साहित बनाउने छ । फलतः ज्ञान, सिप र प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने संघको महत्वपुर्ण योजनामा टेवा मिल्ने छ ।
विगतको मेरो भूमिकालाई नजिकबाट अवलोकन गर्नु हुने मित्रहरुलाई म पद र प्रतिष्ठाका लागि भन्दा संघलाई ठोस् योगदान दिने उद्देश्यले एनआरएनएमा सक्रिय हुदै आएको तथ्य अवगतै छ । त्यही विगतलाई साक्षी राखी यसपटक कार्यकारी पदमा बसेर संघलाई अझ बढी योगदान दिन सकिने विश्वाससहित महासचिव पदमा उम्मेदबार दिने निर्णय गरेको हुँ । संघ बलियो भयो भने मात्र मातृभूमीका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ महासचिवको रुपमा संघलाई संस्थागतरुपमा बलियो बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि निम्न सात निर्देशक सिद्दान्त (मन्त्र)लाई आत्मसात् गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।
– सबैको एनआरएनए (NRNA for all)
– सबल र बहुआयामीक एनआरएनए (Strong and multidimensional NRNA)
– स्मार्ट एनआरएनए (Smart NRNA)
– परिणाममुखी एनआरएनए (Result-oriented NRNA)
– दीगो एनआरएनए (Sustainable NRNA)
– सिप, ज्ञान र नवप्रवर्धनका लागि एनआरएन (NRNA for skill, knowledge and innovation)
– उत्तरदायी र पारदर्शी एनआरएनए (Accountable and transparent NRNA)
यी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न निम्न योजना र कार्यक्रमहरु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन परिषदमा प्रस्तावित गर्नेछु
१.१) भिजन २०२० एण्ड बियोंडको मर्म अनुरुप युवा, महिला, वैदेशिक रोजगार, लगानी, मानवकल्याण, प्राज्ञिक विभाग गरी ६ विभागको गठन गर्ने गरी संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ। विभागको नेतृत्व ६ उपाध्यक्षहरुले गर्नेछन्। सम्वन्धित क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरेको व्यक्ति नेतृत्वमा चुनिने सुनिश्चित हुने गरी विधानमा परिवर्तन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यहरु आफ्नो दक्षता अनुसारको विभागको सदस्य रहनेछन् । हालका समितिहरुले यी विभागहरु अन्तरगत कार्य गर्नेछन्। विभागहरुको कार्यसम्पादन गर्न सचियवालयमा कर्मचारी छुट्याइनेछ ।
१.३) वैदेशिक रोजगारीका समस्या र सम्भावानाका बारे एक श्वेतपत्र तयार गरिनेछ। यसका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रस्तावित ‘वैदेशिक रोजगार कोष’का लागि पञ्जीकृत सदस्य शुल्कबाट १ डलर छुट्टाउन विधानमा व्यवस्था गरिनेछ ।
१.५) संघको उद्देश्य र कार्यक्रमहरुबारे आम गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सुसूचित गरिनेछ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम, विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री (डकुमेन्टरी, न्यूजलेटर आदि)को प्रयोग गर्नुका साथै विदेश स्थित नेपाली संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । संघले अहिले सञ्चालन गरेको Membership Benefit कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइनेछ । यसले गर्दा चुनावबाट प्ररित भएर मात्र सदस्य बन्ने प्रचलन कम हुनेछ ।
२.१) संघको काठमाडौँस्थित सचिवालयलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न कर्मचारीहरुको दक्षतालाई अभिवृद्धी गर्नुका साथै सचिवालयलाई प्रविधियुक्त बनाईनेछ ।
२.२) नेपाल सरकार, विदेशस्थित नेपाली कुटनितिक नियोग, नेपालस्थित वैदेशिक कुटनितिक नियोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग प्रभावकारी संवाद र सहकार्य गर्न एक संयन्त्र तयार गरिने छ ।
२.४) नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बिच समन्वय गर्न पुलको रुपमा काम गरिनेछ । भुमण्डलीकरण (Globalisation) र जलवायु परिवर्तन (Global warning) जस्ता नेपाललाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्दै आएका बिषयमा गैरआवासीय नेपाली र नेपालसँग सरोकार राख्ने विदेशी विज्ञहरु मार्फत सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज पुराइने छ ।
२.५) एनसिसिहरुको स्वायत्ततालाई आत्मसात् गर्दै संघमा अनुशासन कायम गर्न विधि, विधान र नियमावलीलाई अक्षरस पालना गरिने छ ।
२.७) संघसँग आवद्द पदाधिकारीहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
३) स्मार्ट एनआरएनए (Smart NRNA): गैरआवासीय नेपाली संघलाई अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधियुक्त बनाइनेछ।
३.४) संघले हाल प्रयोग गर्दै आएको Management Information System (MIS) लाई सरल र सुरक्षित बनाइने छ । सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण र कागजात एनसिसिको मातहतमा General Data Protection Regulation (GDPR)को पालना गर्दै सुरक्षित राखिनेछ ।
३.५) आइसिसिका बैठक सञ्चालन, मिटिङ मिनटको रेकर्ड, मतदान, उपस्थितिको रेकर्ड राख्न एउटा छुट्टै ई-प्रोग्राम तयार गरिनेछ ।
३.६) भविष्यमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्न ब्लकचेन (blockchain), ईलेक्सन रनर (election runner) जस्ता भरपर्दा प्रविधि वा सेवाप्रदायकको प्रयोगबारे अध्ययन गरिनेछ।
३.७) संघसँग सम्वन्धित दस्ताबेजहरुलाई ईलेक्ट्रोनिक बनाई सहज उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
३.८) एनसिसि तथा आइसिसिका पदाधिकारीहरुले कार्य सम्पादनगर्दा संघको आधिकारिक ईमेल प्रयोग गर्न निर्देशित गरिने छ।
४) परिणाममुखी एनआरएनए (Result-oriented NRNA): गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यक्रमहरु परिणाममुखी बनाउन ठोस नीति तथा कार्यतालिकाको अवलम्बन गरिने छ।
४.१) संघको दुईवर्षे कार्ययोजना सहभागीमूलक रुपमा निर्धारण गरी कार्यक्रमको क्यालेण्डर तयार गरिनेछ । आइसिसि र एनसिसिका गतिविधि यिनै कार्ययोजनामा केन्द्रित हुनेछन् ।
४.५) संघले नेपालमा गर्ने गतिविधी र कार्यक्रमहरुलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर बिस्तार गरिनेछ।
५) दीगो एनआरएनए (Sustainable NRNA): सचिवालय सञ्चालन र परियोजनाका लागि सदस्यता शुल्क र पदाधिकारीको व्यक्तिगत सहयोगमा भर पर्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गरी आर्थिक दीगोपनका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिनेछ।
५.३) संसारभरि छरिएर रहेका एनआरएनएका सदस्यहरु समक्ष (इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस प्रयोग गरेर) आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन पुर्‍याउन चाहने व्यवसायिक संस्थाहरुबाट शुल्क लिइनेछ । यसका लागि सदस्यहरुबाट पुर्व स्विकृती लिइनेछ ।
६.४) नेपाल सरकारले सुरु गरेको Brain Gain Centre का लागि सहकार्य गरी बढी भन्दा बढी दक्ष र विज्ञ गैरआवासीय नेपालीको विवरण तयार गर्न सहयोग गरिनेछ ।
७) उत्तरदायी र पारदर्शी एनआरएनए (Accountable and transparent NRNA): गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुलाई संघका सदस्यप्रति उत्तरदायी बनाउन वैधानिक व्यवस्था गरिने छ। संघको निर्वाचनलाई मर्यादित र मितव्ययी बनाईने छ साथै आर्थिक पारदर्शिताका कायम गरिनेछ।
७.५) संघको अनुमातिक वार्षिक आय-व्यय तय गरी खर्चको विवरण प्रत्येक ३ महिनामा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।
अन्तमा, यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गराउन आफ्नो अमूल्य मत दिइ महासचिव पदमा मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन र सहयोग गर्नु हुन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
– डा. हेम राज शर्मा